Gabadh Soomaali ah oo doorasho kaga guuleysatay ganacsade caaan ah | Biyoguurenews.com
Home Wararka Gabadh Soomaali ah oo doorasho kaga guuleysatay ganacsade caaan ah
Deeqa Dhalac ayaa ka guuleysatay nin ganacsade caddaan ah oo caan ka ahaa deegaankaasi.
Gabadhan oo horay uga shaqeyn jirtay arrimaha bulshada ayaa noqoneysa qofkii ugu horreeyay oo Muslim ah oo deegaankaasi laga doorto.
Doorashadan ayaa ahayd mid gaar ah, kaddib markii uu ninkii xilka haayey iska casilay.
Horaantii bishii October ayaa Deeqo iyo musharixiin kale waxa ay loollan u galeen kursigaasi.
Deeqa ayaa waxa ay ka guulaysatay nin aad caan u ah oo ganacsiyo ku leh magaaladaas oo lagu magacaabo Donald, kaasoo helay 7 boqol oo cod halka ay Deeqo heshay laba jibaar tirada uu helay Donald.
Deeqa ayaa waxa ay daganayd magaalada South Portland muddo 10 sano ah, waxa ayna ka soo qabatay barnaamijyo kala duwan sida qaybta xanaanada carruurta, qaybta guryaha ee magaalada iyo barnaamijyo caafimaad.
Magaalada lagu soo doortay Deeqo ayaa waxa aad ugu yar Soomaalida, balse waxaa jira dad Soomaali ah oo dagan magaalo aad ugu dhaw oo lagu magacaabo Bonland.
Barasaabka magaaladaas ayaa waxa uu horay Soomaalida dagan ugu amray inay ka guuraan.
Dalka Mareykanka ayaa waayadan dambe waxa laga tixgeliyaa isdhexgalka bulshada, waxaana la soo dhaweeyana dadkii horay la takoori jiray, taas oo ka dhacday gobolo uu ka mid yahay Minesota oo laga soo doortay Ilhan Cumar siyaasiyiin kale oo Soomaali ah.
Previous articleMas’uuliyiinta dalka Masar ayaa baaraya saxnimada muuqaal laga soo duubay lamaane u dhashay waddanka Denmark oo iyagoo qaawan dusha sare ka saarnaa ahraamta la qaddariyo ee ku yaalla Giiza-ha.
Next articleAkhriso Qodabada Sharciga ah ee baarlamaanka dawlada xamar ku oogeen farmaajo